म्यानपावरमा ‘एजेन्ट’को व्यवस्था खारेज गरिँदै, १० हजार एजेन्ट अलपत्र पर्ने ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > प्रवास > म्यानपावरमा ‘एजेन्ट’को व्यवस्था खारेज गरिँदै, १० हजार एजेन्ट अलपत्र पर्ने !
म्यानपावरमा ‘एजेन्ट’को व्यवस्था खारेज गरिँदै, १० हजार एजेन्ट अलपत्र पर्ने !
काठमाण्डौं । सरकारले म्यानपावरका लागि एजेन्ट तोक्ने कानुनी व्यवस्था नै हटाउने तयारी गरेको छ । अहिले नेपालमा १० हजार एजेन्टहरु रहेको बताइएकोछ । जसमा ७ सयले मात्र लाइसेन्स लिएका छन् ।
नेपालमा म्यानपावरको एजेन्टका लागि सरकारले लाइसेन्स नै जारी गर्दै आएको छ । यसका लागि दुई लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ । एजेन्ट तोक्नुलाई ‘ठगीको लाइसेन्स’ भन्दै तीव्र आलोचना गरेपछि सरकारले लाइसेन्स दिने व्यवस्थालाई नै हटाउने तयारी गरेको छ ।
संशोधनको तयारीमा रहेको वैदेशिक रोजगार ऐनले अब एजेन्ट सम्बन्धी व्यवस्थालाई खारेज गर्ने लगभग पक्कापक्की भएको छ । नयाँ ऐन जारी भएपछि नेपालमा म्यानपावर एजेन्टको वैधानिकता सकिनेछ ।
सरकारले धेरै युवा एजेन्टमार्फत म्यानपावरसम्म आउँदा ठगिने गरेको निश्कर्ष निकालेको छ । प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाले मात्रै पछिल्ला १० महिनामा २२ वैदेशिक रोजगारीका नाममा भएका ठगीका मुद्दामा २४ एजेन्टलाई पक्राउ गरेको छ । यसै तथ्यबाट पनि सरकार झस्किएको हो ।
एजेन्टहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्ट एसोशिएसनले वैधानिक एजेन्टले राखेका १० हजार सब(एजेन्ट नेपालका क्रियाशील रहेको दावी गर्ने गरेको छ । वैधानिक रुपमा लाइसेन्स लिएका एजेन्टको संख्या ७ सयको हाराहारी मात्रै छ ।
१८ चैत २०७३, ९।००
२०७३ जेष्ठ १८ गते १२:०२ मा प्रकाशित
बुढीगण्डकी आयोजना : सरकारले छुट्याएको रकमले मुआब्जा तिर्नै ८ वर्ष लाग्ने !
फेसबुकले मुद्दा जित्यो
आइओएम डिन सिंहद्वारा राजीनामा
जिडिपीको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम पूर्वाधारमा विनियोजन गर्न सिएनआईको माग
एमालेको मेची–महाकाली अभियान पुनः भोलिदेखि
ग्लोबल र जनता आपसमा गाभिने मुख्य एजेन्डासहित आज एजीएम